Complete scanned Owners Manual for Evinrude Lightwin Model 3012 sy ny modely mitovy.
Complete scanned Parts Manual for Evinrude Lightwin Model 3012 sy ny modely mitovy.
1952-1967 Evinrude sy Johnson 3 HP outboard sambo maotera Model Number Reference. Ny modely dia matetika isa nitaingina eo amin'ny seranan-tsambo ny maotera lafiny bracket. Raha vao manana ny modely isa, izahao ny taona noho ny maotera ao amin'ny Model Number Reference.
Eto dia ny lisitry ny faritra dia mila ho miray feo-ny ny 1952-1967 Evinrude na Johnson 3 HP maotera izahay.
Tune-Up ny paika
Manaraka izany fomba fanao ho miray feo-ny ny 1952-1967 Evinrude na Johnson 3 HP maotera izahay. Ity pejy ity maro ny sary, famaritana, ary ny torohevitra momba ny fomba hahazoana ireo Motors nihazakazaka tsara. Ho naka tsikelikely amin'ny alalan'ny dingana iray ny manao feon-kiran'ny-up amin'ny maotera.